Psychology - iBezzia | IBezzia (Iphepha 2)
Ukuhlala nomntu onengxaki yokuphazamiseka engqondweni yinto enzima ngokwenene, ngakumbi ukuba liqabane lakho.
Ukuba okanye ukungqongwe ngabantu abangathembiyo kunokusichaphazela kakhulu. Kuya kufuneka ufumanise ukuba singanceda njani kwaye yintoni esemva kwabo.
Ngamnye kufuneka abe noxanduva lokukwazi ukulawula iimvakalelo zabo kwaye ubabonise indlela abavakalelwa ngayo.
Iingozi ezintlanu zokuxhomekeka ngokweemvakalelo kwiqabane lakho
Ngelishwa, namhlanje abantu abaninzi baxhomekeke ngokweemvakalelo kumaqabane abo. Uthe ukuxhomekeka ...
Ulawula njani uhlaselo loxinzelelo
Sikuxelela ukuba kunokwenzeka njani ukufunda ukulawula uhlaselo loxinzelelo, kutheni kubonakala ngathi kwaye ziintoni iimpawu zalo.
Ubudlelwane obuyityhefu busekukhanyeni kwemini kwaye kunqabile ukuba umntu ongazange akhe ahlupheke ngalo ngamanye amaxesha ebomini
Fumanisa ukuba ungafumana njani kwaye uhlale ukhuthazeka yonke imihla ukwenza imisebenzi yakho kunye nokufezekisa iinjongo zakho.
Wazi njani ukuba kufuneka sinike ithuba lesibini
Sikunika iingcebiso kunye nemibono ukuze wazi ukuba kufanelekile ukuba sinike ithuba lesibini.
Indlela yokuphucula ubudlelwane bakho nomzimba wakho
Siza kukunika izitshixo ezimbalwa zokuphucula ubudlelwane nomzimba, into enceda ukuzithemba.
Indlela yokuba ngumntu oqolileyo
Sithetha malunga nokuba ngumntu oqolileyo oziqhelanisa noluntu ngezixhobo ezifanelekileyo.
Iindidi ezi-3 zobudlelwane obunetyhefu ukuba zibaleke
Kubalulekile ukuba umntu onetyhefu aqonde maxa onke ukuba le nto ayenzayo ayilunganga kwaphela kwaye kufuneka atshintshe ngendlela engqwabalala.
Sikunika izimvo kunye neengcebiso zokukhathalela impilo yakho yengqondo mihla le ngemiqondiso elula yokukunceda.
Kucacile ukuba umntu onesifo se-Othello unesifo esithile esisesichengeni kwinqanaba lengqondo.
Ufunda njani ukuhlakulela umonde
Sikunika izimvo kunye namacebo okufunda ukuhlakulela umonde, uphawu olukhulu olunambalwa olunalo kubomi banamhlanje.
Isebenza njani i-blackmailer ngokweemvakalelo
Uninzi lwabantu aluqondi ukuba bayaphathwa ngokwasemphefumlweni ngamaqabane abo.
Wazi njani ukuba uyinyanzelo yokuthenga
Sikuxelela ukuba ungazi njani ukuba uyinyanzelo uyokuthenga kwaye ngawaphi amanyathelo okuyeka ukubangunye kwaye uphucule ubomi bakho.
Ingqondo inokukunceda njani
Sithetha ngezibonelelo zokuCamngca, uqeqesho olukhulu olukunceda ukuba ubekhona kwimini yakho.
Sithetha ngemikhwa esempilweni nasengqondweni enokukunceda uzive ungcono kumhla wakho.
Indlela yokujongana neengxaki unesimo sengqondo esifanelekileyo
Sikuxelela ukuba ungazoyisa njani iingxaki kwaye ujongane nazo usebenzisa isimo sengqondo esiluncedo esiluncedo.
IHoudini syndrome inoluhlobo lwesifo sengqondo apho umntu aziva ebotshelelwe emsebenzini okanye kubudlelwane kwaye agqibe ekubeni abaleke.
Ungaba njani umntu onxibelelana ngakumbi
Sikuxelela indlela yokufunda ukuba ngumntu onxibelelana ngakumbi kunye nemibono elula kunye nezikhokelo zemihla ngemihla.
Iingcebiso ngokufunda ukulawula iimvakalelo
Sikunika iingcebiso kunye nezikhokelo ezilula zokufunda ukulawula iimvakalelo ngokufanelekileyo.
Uhlala njani ukhuthazekile ngo-2021
Sikunika umbono wokuba ungahlala njani ukhuthazekile kulo nyaka we-2021 kunye nenyani entsha.
Indlela yokwenza utshintsho ebomini bakho
Sikuxelela ukuba ungazenza njani utshintsho kubomi bakho xa ushiya indawo yokuthuthuzela.
Ungaluhlaziya njani ulwalamano lwakho nabahlobo
Siza kuthetha malunga nendlela yokuphucula ubudlelwane bakho nabahlobo bakho ngeengcebiso ezilula.
Iingcebiso zokwandisa imveliso
Siza kukunika iingcebiso ezithile zokunyusa imveliso xa usenza imisebenzi yemihla ngemihla.
Uwuqala njani unyaka omtsha ngamandla kunye ne-vibes elungileyo
Sikunika isikhokelo kunye nemibono yokuqalisa unyaka omtsha ngamandla ahlaziyiweyo kunye neentshukumo ezifanelekileyo.
Siphakamisa izigqibo ezithile zoNyaka oMtsha ezilula onokuthi uzizalisekise ukonwabela lo nyaka ngokukhuthaza ngakumbi.
Iingcebiso zokulawula iimvakalelo
Sikuxelela ukuba ungazilawula njani iimvakalelo zakho, kunye neengcebiso ezilula.
Iingcebiso zokulawula umsindo
Sikunika iingcebiso ezilula zokufunda ukulawula umsindo, imvakalelo enokuba yingozi.
Ukwahlukana kunokuchaphazela njani ukuzithemba kwakho
Nangona ukuphela kobudlelwane kungekho lula nakubani na, kuya kufuneka uphephe ukonakalisa ukuzithemba kwakho ngalo lonke ixesha.
Indlela yokuphucula ukugxila kwakho
Sikuxelela ezinye zezinto onokuzenza ukuphucula uxinzelelo lwakho phambi koviwo.
Imisebenzi ephucula imeko yakho
Sithetha ngezinto ezilula ezinokukunceda ukuphucula imeko yakho.
Ungajongana njani nokudendwa
Sikunika iingcebiso zokujongana nokudendwa kwaye ujongane nayo ngendlela ejika ibe yinto entle.
Indlela yokwenza iintsuku zivelise
Sikunika isikhokelo kunye nemibono yokwenza ukuba imihla ibe nemveliso ngakumbi, ukuze sisebenzise ixesha.
Amaqhinga okuphucula unxibelelwano kuzo zonke iindawo
Sikunika amaqhinga okuphucula unxibelelwano kuyo nayiphi na indawo yobomi bethu.
Bambalwa abantu abakhumbulayo iqabane elihlala nomntu odandathekileyo kunye nokuba kunzima kanjani ukuphila ngale ndlela.
Indlela yokujongana nokunye ukuvala
Sikunika izikhokelo ezilula zokujongana nokuvalelwa okutsha okunokuza ngenxa yeCovid.
Imodeli yase-OCEAN yeempawu ezintlanu zobuntu
Fumanisa imodeli ye-OCEAN esixelela ngeempawu ezintlanu zobuntu ukuze ufunde okungakumbi ngathi.
Ungaba njani umntu ophumayo kwaye onobuhlobo
Sikuxelela indlela onokuba ngumntu ophumayo kwaye onobuhlobo kunye neengcebiso ezilula.
Kutheni uxhasa ngakumbi
Sikuxelela ukuba ziziphi izibonelelo zokubaxhasa ngakumbi kule mihla yethu.
Iindlela ezahlukeneyo zokuphepha uxinzelelo
Sithetha ngeendlela ezahlukeneyo zokususa uxinzelelo kubomi bethu bemihla ngemihla, sinemibono elula yokwenza.
Ngaba umdlalo uluphucula njani uxinzelelo?
Ixhala ngumhla wosuku, kwaye ukuba ufunda oku kungenxa yokuba unokuzifumana okanye ...
Uyenza njani into elungileyo yokusebenzisa ii-mobiles
Sikuxelela indlela yokusebenzisa ngokufanelekileyo izixhobo eziphathwayo, ezibalulekileyo namhlanje.
Funda ukuba ngumntu oqinisekileyo kwaye onwabileyo
Sikuxelela ukuba kunokwenzeka njani ukuba ube ngumntu owonwabileyo kunye novuyo kunye neengcebiso ezinomdla.
Ungaluphucula njani unxibelelwano nosapho
Sikuxelela ukuba ungaluphucula njani unxibelelwano losapho kunye neengcebiso kunye nezikhokelo eziluncedo.
Kutheni ukulala kancinci kunokuba kungabi kubi kangako
Ukuphumla kuyadingeka ukuze wenze kakuhle, kodwa kuthekani ukuba ulala kancinci kunokuba ufuna? Sikuxelela yonke into ...
Ungamelana njani nokuphela kwehlobo kunye neeholide
Sikunika iingcebiso zokujongana nokuphela kwehlobo kunye neeholide kunye nobunzima bokubuyela esiqhelweni.
Uqala njani ukoyisa uloyiko lwakho
Fumanisa ukuba ungaqala njani ukoyisa uloyiko lwakho ngezikhokelo ezilula ezinokukunceda.
Senze ntoni ukuba sidlula kwixesha losizi
Fumanisa esinokukwenza ukuba sihamba kwixesha losizi ebomini bethu, ukuze sikwazi ukuwoyisa ngcono.
Ungawulawula njani ngcono umzuzu wasemva kweholide
Sikunika ezinye izimvo kunye nenkuthazo yokoyisa ngcono umzuzu wasemva kwekhefu.
Ungayilwa njani imvakalelo yokuba lilolo
Sikunika izikhokelo ukuze ukwazi ukulwa uluvo lokuba lilolo kwaye ayizukujika ibe yinto embi kuthi.
Uyenza njani yonke imihla into ekhethekileyo
Fumanisa ukuba usuku ngalunye lunokwenziwa njani olukhethekileyo, ukongeza amaxesha awodwa nahlukileyo.
Ungazi njani ukuba ifuna nje ukukwenza ube nesiyezi
Sikunika iingcebiso zokuba wazi ukuba umntu omthandayo ufuna ukukwenza ube nesiyezi okanye uziva enye into ngakumbi kuwe.
Ufunda njani ukunxibelelana nawe
Sikunika izikhokelo ezilula zokufunda ukunxibelelana nawe kwihlabathi eligcwele ingxolo kunye nolwazi.
Iingcebiso zokukunceda ulwe nokudakumba
Sikunika iingcebiso eziluncedo ezinokukunceda ekulweni nokudakumba xa usizi luye lwaba yingxaki.
Iingcebiso zokuphumelela loo mntu
Sikunika iingcebiso ezilula nezisebenzisekayo zokuba woyise lo mntu ukhethekileyo omthandayo.
Ukuzithandela kwindawo yokukhusela izilwanyana kukwenza umntu ongcono
Ukuba ufuna ukukhula njengomntu ... kulula njengokuzithandela kwindawo yokuhlala izilwanyana, uya kuziva ulungile ngesiqu sakho!
Ungaba njani umntu onokudibana ngakumbi
Fumanisa ukuba ngumntu onobuhlobo ngakumbi ngezi ngcebiso zilula ezinokukunceda kubudlelwane bakho nabanye abantu.
Ubulolo bunezinto ezintle nazo
Fumanisa ukuba ubulolo bunokusizisela njani izinto ezilungileyo ukuba sifunda ukonwaba mihla le.
Funda ukusebenzisa ixesha lakho kwaye uvelise ngakumbi
Sikunika imibono yokwenza ukuba ulisebenzise kakuhle ixesha lakho kwaye ube nemveliso ngakumbi mihla le kunye neengcebiso ezilula.
Uyenza njani imikhwa yakho kwaye ulawule ubomi bakho
Imikhwa ilawula ubomi bethu bemihla ngemihla, kodwa ukuqonda ukuba zibamba njani kwingqondo kunokukunceda ubethelele imikhwa ...
Izimvo zokuphucula ukuzithemba okanye ukuzithemba
Fumanisa indlela yokuzithemba nokuzithemba ngakumbi, into ethi ifumaneke ngokusebenza kuyo yonke imihla.
Unokuphucula ukuzithemba ngakumbi ukuze iziseko zakho zokuzithemba zikhule. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba kanjani? Sikuxelela iindlela ezithile.
Uziqhelanisa njani nenyani entsha
Sikunika izitshixo ezilula zokufunda ukuziqhelanisa nenyani entsha eza emva kokuvalelwa.
Imiqobo yengqondo ekusombululeni iingxaki
Ukusuka ekuququzeleleni ingqokelela yemovie ukuthatha isigqibo sokuthenga ikhaya, ukusombulula iingxaki kwenza icandelo elikhulu le ...
Kutheni le nto kubaluleke kakhulu ukuba uphume uye kudlala imidlalo
Ukuya kudlala imidlalo sele kuvunyelwe kwaye ngaphandle kwamathandabuzo yinto ekufuneka siyenzile kuba ibaluleke kakhulu kwingqondo yethu.
Indlela yokulwa nokudinwa kwentwasahlobo
Sikunika iingcebiso kunye neengcinga zokulwa ne-asthenia yasentwasahlobo ethi isinike loo mvakalelo yokudinwa kunye nosizi.
Ungaluthintela njani uxinzelelo olubangelwa kukuvalelwa
Sikuxelela ezinye izimvo ukuthintela uxinzelelo kunye novalo olubonakala ngakumbi nangakumbi ngokuvalelwa.
Unokuba ngabantu abanjani ngakumbi
Sikunika ezinye izimvo zokuba ungonwaba ngakumbi kwindawo yemihla ngemihla, uneengcebiso ezahlukeneyo.
Jonga usuku ngalunye ngendlela efanelekileyo
Sikuxelela ukuba ungamelana njani nemini yakho ngendlela elungileyo, kunye nezimbo zomzimba ezincinci ukuze wonwabe.
Iingcebiso zokulibala umntu ngokukhawuleza
Sikunika iingcebiso ezinomdla zokuba ulibale umntu ngokukhawuleza, ukuze siqhubeke nobomi bethu.
Izimvo zokuhlala uzolile ngexesha lokuvalelwa yedwa
Sikuxelela ngento esinokuyenza ukuhlala sizolile kwaye sikudlulise bhetele ngakumbi.
Imikhwa esenza singonwabi
Sithetha ngokuba yeyiphi imikhwa esenza ukuba singonwabi ukuze sikwazi ukutshintsha nokuzilungisa.
Imikhwa yabantu abaphumeleleyo
Sikuxelela ukuba zeziphi imikhwa yabantu abaphumeleleyo ebomini, kuba baziphatha ngeendlela ezithile.
Ufunda njani ukugxila kumsebenzi
Sikunika izikhokelo ezilula zokufunda ukugxila kumsebenzi othile, kunye nemibono oza kuyenza.
Indlela yokonwabela ixesha lokuba wedwa
Sikunika izikhokelo zokuba ufunde ukonwabela ixesha wedwa kunye nokubaluleka kokwazi ukuba wedwa yonke imihla.
Iingcebiso zokulawula imithambo-luvo
Sikunika izikhokelo kunye neengcebiso zokufunda ukulawula imithambo-luvo yakho yonke imihla ukuze iimeko zingasoyisi.
Izitshixo zokukhusela kunye nokuphucula ukuzithemba
Sikuxelela ukuba zeziphi izitshixo zokukhusela kunye nokuphucula ukuzithemba, into ekufuneka yenziwe yonke imihla ukunqanda iingxaki zengqondo.
Wazi njani ukuba umntu uyaxoka
Sikuxelela ngendlela onokwazi ngayo ukuba umntu uyaxoka, kuba oku kuhlala kuyingxaki esidibana nayo amaxesha ngamaxesha.
Ukwazi njani ukuba unomdla wokwenene
Sikunika isikhokelo sokwazi ukuba ingaba lo mntu unomdla wokwenene na kuwe, kuba kukho izinto ezithile ekufuneka sizithathele ingqalelo.
Kutheni ukuhamba kunokukwenza wonwabe
Siyakuxelela ukuba kutheni uhambo olunokukwenza wonwabe kakhulu, kuba yindlela yokukhula kwaye ubone umhlaba kwelinye icala.
Izindululo zonyaka omtsha ezikunceda ukuba ube seluxolweni
Sikubonisa izigqibo zomNyaka oMtsha ezinento yokwenza noxolo lwangaphakathi kunye nokuhlakulela umphefumlo wolonwabo olukhulu.
Ungabazi njani kwaye ubaphephe abantu abanetyhefu
Sikunika izikhokelo zokuqonda abantu abanetyhefu, abangasiziseli izinto ezintle kubudlelwane bethu.
IKrisimesi iyodwa, ngumceli mngeni
Sikuxelela ukuba ungayinqoba njani iKrisimesi yedwa, into eyenzeka kubantu abaninzi kwaye ingaba yingxaki.
Iingcebiso zokulawula ngokuthenga okunyanzelekileyo
Sikunika iingcebiso ezilungileyo zokuphepha ukuthenga ngokunyanzelekileyo ngala maxesha, usebenzisa ingqiqo.
Izinto ezinokukunceda wonwabe
Sikuxelela ukuba zeziphi izitshixo esinokuthi sizisebenzise ukuze sifunde ukonwaba kule mihla yethu, ngezimbo zomzimba ezilula.
Izibonelelo zengqondo yokuba nesilwanyana sasekhaya
Fumanisa ukuba zeziphi izibonelelo zengqondo zokuba nesilwanyana sasekhaya, into enokonyusa ulonwabo lwethu kunye nokuphucula ukuzithemba.
Kutheni le nto kufuneka usebenzise intuition yakho ngakumbi
Sikuxelela ukuba kutheni intuition kufuneka isetyenziswe ngakumbi, ukuba iqulathe ntoni kwaye kufuneka sikwazi kanjani ukuyiqeqesha ngcono.
Izakhono zokuba sisithethi esihle
Sikuxelela ukuba ziziphi iimpawu kunye nobuchule bokuba sisithethi esihle esikwaziyo ukunxibelelana nabanye.
Iingcebiso zokuba ngumntu ophilileyo ngokwengqondo
Sikuxelela ukuba kunokwenzeka njani ukuba ube ngumntu ophilileyo ngokwengqondo kwaye zeziphi iimpawu zobuntu ezisincedayo.
Sikunika isikhokelo kunye neengcebiso zokulawula uhlaselo loxinzelelo, ingxaki enokuthi ivele nangaliphi na ixesha.
Ujongana njani notshintsho lwexesha
Sikubonisa ukuba ujongane njani notshintsho olutsha lonyaka ukuya ekwindla kunye neziphumo ezibandakanya oku, njengokudinwa kwemihla ngemihla.
Ufunda njani ukoyisa ukusilela
Sikuxelela ukuba ungafunda njani ukwanela kwaye woyise ukusilela, kuba le yinto eyenzeka kuye wonke umntu ebomini bakho.
Ungayiphepha njani inkanuko yenethiwekhi
Sikuxelela ukuba ungabuthintela njani ukutyeba kunxibelelwano lwasentlalweni, ingxaki yangoku echaphazela abantu abaninzi nangakumbi.
Ungakuphucula njani ukusebenza kwakho kwizifundo
Sikuxelela indlela onokuthi uyiphucule ngayo indlela oqhuba ngayo kwizifundo ngokusebenzisa iingcebiso ezilula kunye neendlela onokuthi uzilandele ukuphumelela.
Ufunda njani ukulungelelana ngakumbi
Sikunika izikhokelo kunye neengcebiso zokufunda ukuzilungiselela ngakumbi imihla ngemihla, ngamanyathelo alula kunye nemibono oza kuyilandela.
Amabinzana ekufuneka uwafake kubomi bakho ukusukela ngoku
Ungaphoswa ngala mabinzana mathathu anokukwenza ucinge ngobomi bakho bangoku, uya kuthanda ukubazi ukuba ubungabazi ngaphambili!
Indlela yokubonisa ukhuseleko kwabanye
Sikubonisa izikhokelo zokufunda ukubonisa ukhuseleko kwabanye imihla ngemihla. Inkqubo enzima kodwa eluncedo kakhulu.
Ufunda njani ukuphumla
Fumanisa ezinye iindlela ezilula kunye neengcebiso zokufunda ukuphumla yonke imihla, ukuthintela uxinzelelo olunokuthi lusichaphazele.
Sukuyenza impazamo: ukuba ibuhlungu, ayilothando
Ngaba ucinga ukuba luthando kodwa ubudlelwane onabo neqabane lakho buhlungu? Ke sukuzenza umntwana, kuba ukuba kubuhlungu, ayilothando.
Ufunda njani ukunxibelelana ngcono nabantu
Fumanisa ukuba kunokwenzeka njani ukuba ufunde ukunxibelelana nabanye ngezi ngcebiso ziphucula ubudlelwane kunye nabanye.
Ufunda njani ngaphandle kweziphazamiso kwaye ngokufanelekileyo
Fumana ukuba ungafunda njani ngaphandle kweziphazamiso kwaye usebenze ngokukuko. Ezi ngcebiso zinokukunceda ukuphucula ukusebenza kwakho kwizifundo zakho.
Ukuphepha ukubandezeleka okungancediyo
Sikunika ezinye izimvo zokuphepha ukubandezeleka okungenamsebenzi kwengqondo kubomi bethu bemihla ngemihla obusibangela iingxaki ezininzi.
Ungamnceda njani umhlobo onengxaki
Sikunika imibono ukuze wazi ukuba ungamnceda njani umhlobo okwixesha elibi kwaye odinga ingcebiso yethu.
Imikhwa yokoyisa uxinzelelo
Fumanisa imikhwa enokukunceda woyise inqanaba loxinzelelo, into eqhelekileyo kwaye ekufuneka ilwelwe.
Ukusebenza okanye ukufundela ekhaya kusichaphazela njani?
Sikuxelela izinto ezilungileyo nezingalunganga zesigqibo sokusebenza okanye sokufundela ekhaya, into eyenziwayo rhoqo nangakumbi.
Izibonelelo zengqondo zokudlala imidlalo
Sikuxelela izibonelelo zengqondo ezinokuziswa yimidlalo yesiqhelo, into ekufuneka siyibandakanye kubomi bethu bemihla ngemihla.
Izibonelelo zengqondo zokuhamba
Sikuxelela ukuba ziziphi izibonelelo zengqondo kunye nezibonelelo zokuhamba ezisinika zona kunye nokukwazi ukwazi ilizwe elijikelezileyo.
Iingcebiso zokufunda ukuzimela ngakumbi
Sikunika izimvo zokufunda ukuzimela ngakumbi, into ebaluleke kakhulu ukuthintela ukuxhomekeka ngokweemvakalelo.
Izindlela zokuthetha esidlangalaleni
Sikunika ezinye zezitshixo kunye namaqhinga okufunda ukuthetha esidlangalaleni, into ekufuneka yenziwe ngumntu wonke ngamanye amaxesha ebomini babo.
Ungalunciphisa njani uxinzelelo lwemihla ngemihla
Uxinzelelo luhambelana kakhulu nokwanda kwazo zonke iintlobo zezifo, ke kufuneka sizame ukukuphepha okanye ukusinciphisa.
Ukwazi njani ukuba uyabunandipha ubuhlobo obunempilo
Sikunika izikhokelo ukuze ukwazi ukubona ukuba bobuphi ubuhlobo obunempilo obuvela kubuhlobo obunetyhefu, ukuze sibe nolwalamano oluluncedo.
Ukuzonwabisa kunye nokuphumla, kubalulekile ekuhlaleni
Siyakuxelela ukuba kutheni ukuzonwabisa kunye nokuphumla kufuneka kube yinxalenye yemihla yethu, kuba zinezibonelelo ezininzi.
Ungabuyela njani kwisiqhelo ngaphandle kokudimazeka
Siza kukunika ezinye izimvo kunye nezikhokelo zokubuyela kwindlela yakho yemihla ngemihla emva kweKrisimesi ngaphandle kokudimazeka okanye ukudimazeka.
Izigqibo zonyaka omtsha onokuzifeza
Sikunika imibono nezikhokelo zokwenza izigqibo zoNyaka oMtsha ezinokuthi zizalisekiswe, ukuze kulo nyaka sizifezekise.
Ufunda njani ukuthomalalisa uxinzelelo
Ixhala yingxaki echaphazela abantu abaninzi kwaye inento yokwenza noxinzelelo esinalo, ke kufuneka sifunde ukulwa nalo.
Ungamazi njani umntu othanda uburharha
Umntu oziphethe kakubi uya kuziphatha ngendlela ethile. Kubalulekile ukubaqaphela ukuze ubaphephe, kuba bangabantu abanetyhefu.
5 Izifundo esizifundayo kwinja yethu
Fumanisa izifundo ezintlanu umntu ngamnye anokuzifunda kwinja yakhe. Ukuba unesilwanyana sasekhaya uza kuba sele uyazi ukuba zeziphi izinto abasifundisa zona.
Ungamnceda njani umntu okhathazekileyo okanye odandathekileyo
Fumanisa ukuba umntu olusizi okanye odandathekileyo unokuncedwa njani ngala maxesha ngenkxaso nangengcebiso.
Ufunda njani ukuba nembono elunge ngakumbi
Ukuba nethemba ngakumbi yinto ekufuneka ifundwe yonke imihla, ukusebenza kancinci kancinci kwingqondo eyakhayo neyonwabisayo, eyoyisa iingxaki.
Iingcebiso zokunika inkxaso ngokweemvakalelo
Sishiya ezinye zeengcebiso eziphambili zokunika inkxaso kubo bonke abo bakungqongileyo kwaye banesidingo. Uya kubona ezona ziphumo zibalaseleyo!
Uyifumana njani inkuthazo yokuqhubeka
Ukufumana inkuthazo xa kufikwa ekufezekiseni iinjongo kubalulekile, kuba ngaphandle kwayo sihlala siphosa itawuli kwaye sincame.
Zeziphi ezona ntlobo ziphambili zothando ezikhoyo
Fumana ukuba zeziphi iintlobo zothando ezikhoyo. Inye nganye ichaza ubomi bethu kwaye igqibezela isimilo sethu.
Indlela yokusingatha ukugxekwa
Ukwamkela ukugxekwa kunokuba lula kunokuba ucinga. Kufuneka ulandele nje amanyathelo ambalwa kwaye uya kuwufezekisa.
Indlela yokuchonga ixoki elinyanzelekileyo
Ukuba ufuna ukufumanisa ixoki elinyanzelekileyo, apha siza kukushiya zonke izitshixo zeli ngxaki okanye likhoboka lokuxoka. Fumana konke malunga neentsomi.
Amaqhosha kufuneka usebenze ukunyanga uxinzelelo
Uxinzelelo sisinye sezifo ezinzima kakhulu. Namhlanje sikhanyisa ukukhanya kobo bumnyama, sisebenzisa uthotho lwezitshixo neengcali ezikwasicebisayo. Uya kubona ukuba ulawula njani ukuthatha inyathelo eliya phambili!
Iziphumo zoxinzelelo kwimpilo yakho
Iziphumo zoxinzelelo oluqhubekayo olunazo kwimpilo yethu zahlukile kakhulu kwaye zinokujika zibe ziingxaki ezinkulu, ke kufuneka sazi ukuba sazi njani xa zisichaphazela ngokugqithileyo.
Ungabuqonda njani ubuhlobo obunobungozi
Lixesha lokuba uqaphele iimpawu ezikuxelela ukuba unabahlobo abanetyhefu ukuze ubasuse ebomini bakho kwaye wonwabele ubuhlobo bokwenyani.
Ukuzivocavoca kunye neengcebiso zokuphucula ukuzithemba
Xa sinokuzithemba okuphantsi, kuyakusenza ukuba sibone yonke into engalunganga ngathi nangehlabathi elisingqongileyo. Ke namhlanje, siza kuyisebenza yonke ukuyitshintsha ngendlela elungileyo. Ukuzivocavoca kunye neengcebiso zokuphucula ukuzithemba kwakho ongafanele ukuba uziphose.
Kutheni le nto kufuneka sifunde ukuba sodwa
Ukuba wedwa yinto engathethi ukuba siziva sisodwa. Ukuba wedwa kuya kusinceda sazane kwaye senze ubudlelwane obunempilo nabanye.
Indlela yesiqhelo ebuchaphazela ngayo ubomi bethu
Kwinqaku lethu namhlanje sixelela indlela esihlala sibuchaphazela ngayo ubomi bethu kwaye sichaza zombini izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga.
Funda ukuqaphela indlela oziva ngayo
Ukuba ufunda ukuqonda iipateni zakho zeemvakalelo, unokulindela ukuba yeyiphi iminyhadala ekwenza uzive ungcono okanye umbi kwaye ke usebenze ukuze uzive ulungile.
Izinto ezi-7 kufuneka uthule ngokwenkcubeko yamaHindu
Ezi zizinto ezisi-7 ekufuneka uthule ngokwenkcubeko yamaHindu. Zonke iinkcubeko zibonelela ngento yokufunda, kuba inkcubeko yamaHindu ibingazukuncipha.
Jongana neenyaniso ezithile ukuze womelele
Ebomini kuya kufuneka ujongane neenyaniso ezithile ukuze womelele yonke imihla. Namhlanje sikuxelela ukuba zeziphi ezo zinto kwaye singazoyisa njani yonke imihla.
Imiyalezo yabafazi abomeleleyo
Kwinqaku lethu leengqondo namhlanje, siyangqina indima yabasetyhini kuluntu lwanamhlanje: Imiyalezo yabasetyhini abomeleleyo.
Izitshixo ezi-5 zokuqala unyaka kunyawo lwasekunene
Kwinqaku lethu le-Psychology namhlanje, sikunika izitshixo ezi-5 zokuqala unyaka ngeenyawo zasekunene. Hi ndlela leyi, unyaka omtsha wonwabile kubo bonke abafundi bethu!
Indlela yokujongana nezigqibo zoNyaka oMtsha
Qho ngonyaka silungiselela ukuqala inqanaba elitsha, ke siyakuxelela ukuba ujongane njani nezigqibo zoNyaka oMtsha ukuze uziphumeze.
Iingcebiso ngokuchasene noxinzelelo lomsebenzi
Kule nqaku kwezempilo nakwisayikholoji, sikulethela uthotho lweengcebiso ngokuchasene noxinzelelo lomsebenzi, ngakumbi iingcebiso ezi-6.
Kwinqaku lanamhlanje lesayikholoji sikunika uthotho lwamacebo ngendlela esinokusikhuthaza ngayo ukuba siphumeze oko besizimisele ukukwenza.
Ngaba uyazi ukuba yintoni umgaqo we-90/10 kwisayikholoji?
Ngaba uyazi ukuba yintoni umgaqo we-90/10 kwisayikholoji? Awunakukhetha okwenzekayo kuwe, kodwa ungakhetha ukuba usabela njani kuyo.
Phila ubomi ngokusemandleni akho
Inqaku lanamhlanje le-Psychology sithetha ngokuphila ubomi ngokusemandleni akho ... Landela ezi ngcebiso kunye neengcebiso zokwenza njalo.
Konke malunga noxinzelelo: oonobangela, iziphumo, kunye neengcebiso
Kwinqaku leengqondo lanamhlanje sithetha konke malunga nokudakumba: Oonobangela, iziphumo kunye neengcebiso. Sisifo esingafanele sithathwe kancinci.
Carl Jung amabinzana okukhula kwakho
Kwinqaku leengqondo lanamhlanje sikulethela iikowuti ezivela kuCarl Jung ngokukhula kwakho. Kucetyiswa kakhulu ukuba uzifunde!
Funda ukuhlala wedwa
Kwinqaku leengqondo lanamhlanje sikuxelela ukuba ukuhlala wedwa akufuneki kube kubi, ngokuchaseneyo. Lelona xesha lilungileyo lokuzifumanisa.
Imikhwa ekwenza ube lusizi ngakumbi yonke imihla
Kwinqaku lanamhlanje lePsychology siza kukuxelela ukuba yeyiphi imikhwa ekwenza ube lusizi mihla le. Zazi kwaye uthathe amanyathelo okuzitshintsha.
Uzivusa njani iingcinga ezintle
Kwinqaku lethu leengqondo namhlanje, sikuxelela indlela yokuvusa ukucinga okuhle. Landela ezi ngcebiso kunye nezikhokelo kwaye ufezekise iinjongo kunye namaphupha akho.
Isigqibo esichasene nobukrakra nguRafael Santandreu
Namhlanje sikunika isigqibo sokulwa nobukrakra nguRafael Santandreu. Amanqaku ali-10 anokukwenza ukuba "ungoyiki" zizinto ezincinanana ezenzeka kuthi yonke imihla.
I-cybophobia okanye uloyiko lokutya
Ungalahli iinkcukacha zeempawu eziphambili ze-cybophobia okanye uloyiko lokutya kunye neziphumo ezinazo kwimpilo.
I-Agoraphobia yenye yezona phobias zixhaphakileyo eluntwini kwaye inoloyiko olungenangqondo lweendawo ezivulekileyo nezoluntu.
Ungamelana njani nokuswelekelwa ngumntu omthandayo
Sikuxelela indlela yokujamelana nokuphulukana nomntu omthandayo: onke amanqanaba esidlula kuwo xa siphulukene nomntu kunye nento ekufuneka siyenze ukujongana nayo.
Umzekeliso kaBuddhist ukonwaba ngakumbi
Kwinqaku lanamhlanje lePsychology sichaza kwaye sicacisa umzekeliso omhle wamaBuddha ukuze sonwabe. Ukungahoyi ngundoqo.
Zeziphi iintlobo ze-autism ezikhoyo
Nika ingqalelo kwiindidi ze-autism ezikhoyo ukuze wazi indlela yokwahlula nganye nganye kwaye wazi neempawu zazo.
Iimpawu zeemvakalelo ziyichaphazela njani impilo yethu
Kule nqaku, sibona indlela iimpawu zeemvakalelo ezichaphazela ngayo impilo yethu, ngamanye amaxesha zikhokelela kwiimpawu ezinzulu zentliziyo kunye nokuphefumla.
Ezona ngxaki zixhaphakileyo zengqondo kulutsha
Thatha inqaku elifanelekileyo lokuphazamiseka kwengqondo okuxhaphakileyo kulutsha namhlanje.
Owona maphupha amabi aqhelekileyo kunye nentsingiselo yawo: Ngaba ikho enye kuzo evakala iqhelekile kuwe?
Ngaba unomdla kwihlabathi lamaphupha? Namhlanje sikwazisa ngamaphupha amabi aqhelekileyo kunye notoliko olwenziwe ngamnye kubo.
Ungavusa njani ukucinga okuqinisekileyo: izikhokelo kunye neengcebiso
Inqaku lanamhlanje le-Psychology siza kukunika uthotho lweengcebiso kunye nezikhokelo zokuvusa ukucinga okuhle. Ngaba unesibindi sokuzenza?
Ixhala: Yintoni le kwaye uyilawule njani
Kweli nqaku kwiPsychology sichaza ukungahambi kakuhle phakathi kwabantu namhlanje: uxinzelelo.
Izigaba zokuphumelela uloyiko ngokuqinisekileyo
Kwinqaku lanamhlanje lesayikholoji sikuxelela ukuba ngamanqanaba awoyiso loloyiko lwengqondo anokuhlulwa. Ukuba uyafuna, ungoyisa.
Ungaziphatha njani ngempumelelo kudliwanondlebe lomsebenzi
Ngaba unayo udliwanondlebe lomsebenzi kwaye ufuna ukufumana ukhuseleko? Sikuzisa iingcebiso ezilula ukuze ufunde ukusebenza ngokuzithemba.
Imikhwa emi-5 yemihla ngemihla eyehlisa imood yakho
Le yimikhwa emi-5 yemihla ngemihla eyehlisa imvakalelo yakho. Nguwe kuphela onamandla okutshintsha kwaye ubanqande ... Ulinde ntoni?
Ngaba ucinga ukuba uyaphathwa? Iiflegi ezibomvu
Ngaba ucinga ukuba unokuba yinxalenye yobudlelwane obunetyhefu apho ulawulwa liqabane lakho? Le yeyona miqondiso iqhelekileyo.
Zinyanzele ukuba ube nosuku oluhle kwaye ungavumeli nantoni na ibe nawe
Inqaku lanamhlanje lePsychology sikunika ingcebiso: zinyanzele ukuba ubenosuku oluhle kwaye akukho nto kwaye akukho mntu unokukunceda. Zijikeleze nabantu abanethemba.
Unyana wam uneZakhono eziPhakamileyo, ngoku yintoni? Izikhokelo kunye neempawu
Ngaba umntwana wakho uneZakhono eziPhakamileyo kwaye ufumanisa ukuba ulahlekile? Apha unokufumana ulwazi oluyimfuneko ukukhuthaza amandla apheleleyo.
Isishwankathelo esifutshane ngoxinzelelo kunye nonyango lwaso
Kwinqaku esilinikezela namhlanje kwizengqondo siza kuthetha nawe malunga nokuphazamiseka kwengqondo okuqhelekileyo: uxinzelelo kunye nonyango lwayo.
Fumana iinjongo zakho imihla ngemihla
Ukuba uneenjongo, ukuba unamaphupha, ukuba unethemba, fezekisa iinjongo zakho yonke imihla ngesi sikhokelo silula sisebenzayo sikunikeza namhlanje.
Amandla amasela ngokweDalai Lama
Inqaku lanamhlanje kwiPsychology lijongana nabo bantu okanye iimeko ezinganyamezelekiyo, eziba amandla ethu yonke imihla.
Abantu abanetyhefu? Hayi Nceda!
Kwinqaku lanamhlanje lesayikholoji sikunika uthotho lwezikhokelo zokuba uqaphele abo bantu banetyhefu "beba amaphupha" kunye namandla.
Ubukrelekrele bemvakalelo I. Ukwazi iimvakalelo zethu
Uyazi ukubaluleka kobukrelekrele bemvakalelo? Sikubonisa indlela ezisebenza ngayo iimvakalelo zakho kunye nolwalamano lwabo nengcinga.
Usuku lwakho lokuqala lomsebenzi? Izitshixo zokoyisa, kwinqaku elilungileyo!
Ngaba usuku lwakho lokuqala lomsebenzi lusondele? Imithambo, uvuyo kunye nokungaqiniseki okuninzi! Ukuba ufuna ukuchitha olu suku kwinqaku eliphezulu, ezi ngcebiso zinomdla kuwe!
Iincwadi ezi-3 zokuphucula ukuzithemba
Kweli nqaku lezengqondo siphonononga ubume beemvakalelo kunye nedilesi, okanye ubuncinci ukuzama, ukuzithemba.
ABantwana aBafikisayo: Amaqhinga okuthetha-thethana nabo
Ngaba uhamba neemeko zongquzulwano nomntwana wakho ofikisayo? Yazi ukubaluleka kothethathethwano kwaye ... kwenze!
Isayikholoji abayisebenzisayo kwivenkile ukuze wenze ukuba uthenge ngaphezulu
Ukuba ufuna ukuzama ukugcina kwivenkile yeKrisimesi, fumana ezinye zeendlela zengqondo ezisetyenziselwa ukwenza ukuba uthenge ngaphezulu!
Zihlobo, ubuncwane beemvakalelo zolo "sapho" silukhethayo
Abahlobo bethu bubutyebi beemvakalelo kwaye olo sapho esizikhethele lona kwaye oluya kusivumela ukuba sibenobomi obonwabisayo.
Ukungathembeki, iintlungu ezihlala zihleli
Ukuba uyathanda, khathalela, ukuba awuthandi, akukho mbono. Ukungathembeki sesona senzo sibuhlungu sinokuthi sihlupheke kubudlelwane bethu.
Impatho gadalala: amanxeba angabonakaliyo
Ukuphathwa gadalala ngobuqhetseba: kuxhaphake kakhulu kunokuba sicinga, kwaye kusishiya nenxeba elingabonakaliyo nelingabonakaliyo. Siyakumema ukuba uphengulule ngalo mbandela.
Usuku lukaMama: kwabo bafazi baxhasa iintliziyo zethu
Namhlanje e-Bezzia sibhiyozela uSuku loMama, ukusuka apha ukunikela imbeko kubo bonke abo bafazi banesibindi abasinike ubomi.
Usuku lweeNcwadi: ukufundwa okuvula amehlo ethu, ukufundwa okusenza sikhululeke
Namhlanje, umhla wama-23 ku-Epreli, kubhiyozelwa uSuku lweeNcwadi kwiHlabathi liphela. E-Bezzia sifuna ukwabelana nawe ngayo yonke into efundiswayo ifanekisela thina.
Ndifuna ukwangana okuphelisa lonke uloyiko lwam
Ukuwola kunamandla anyangayo kwaye aphilisayo esingafanele ukwenza ngaphandle kwawo. Zingaphi iihagi osinike zona namhlanje?
Ungayithanda njani ngaphandle kokuxhomekeka
NgokukaWalter Riso, ugqirha wezengqondo kunye nochwephesha kubudlelwane obuchaphazelekayo, ukuxhomekeka kweemvakalelo kuhambelana kakhulu nokungakhuli ngokweemvakalelo. Kwi…
Usuku lukaTata: ngezo ntsika zimangalisayo zobomi bethu
Namhlanje sibhiyozela uSuku lukaTata, usuku olukhethekileyo lokubhiyozela olo manyano lukhethekileyo kunye nabazali bethu kunye namaqabane ethu.
Usuku lwabasetyhini: kuthi sonke singabafazi abanesibindi
Namhlanje, ngoMatshi 8, uSuku lwaBasetyhini lubhiyozelwa. Umzuzu okhethekileyo wokubonakalisa kuko konke ekufuneka sifezekile kolu luntu.
Ungaba njani ngumfazi osebenzayo kwilizwe lendoda
Kwiintsuku ezimbalwa kubhiyozelwa usuku lomfazi osebenzayo. Siyakumema ukuba ucinge ngobunyani bezentlalo nobuntu bethu sonke namhlanje.
Yile nto yenzekayo kwingqondo yakho xa uphoxekile eluthandweni
Yikholwe okanye ungakholelwa, ngokophando olwenziwe kwiYunivesithi yaseSt. Louis (United States), ingqondo yethu ...
Ukoyika uthando: ukoyika ukwenzakaliswa
Ukoyika uthando yinto eqhelekileyo: yinto eyaziwa ngokuba yiphilophobia. Siyakumema ukuba ucamngce ngayo.
Ezi zinto zenzeka ngokutshintsha ubomi bethu
Kukho izinto ezingqamene nezinto eziguqula ubomi bethu, kodwa ayisosiphelo esiza nazo, kodwa ukhetho lwethu ... Siyakumema ukuba ucinge ngayo.
Ndingumntu obuthathaka kakhulu (PAS)
Umntu o-ethe-ethe kakhulu we-PAS, ubona kwaye uziva umhlaba ngendlela eyahlukileyo, apho ubudlelwane obudibeneyo kunye nolwalamano akusoloko kulula. Fumanisa.
Fumanisa ukuba yeyiphi eyona mpazamo iqhelekileyo kubudlelwane
Kukho impazamo apho sihlala siwela rhoqo kubudlelwane bethu. Ungaphoswa, uyifumane kunye nathi!
Iingcebiso ezi-2 zokufumana kwakhona ukuxhomekeka kwikhowudi
Ngaba uyazi ukuba yintoni ukuxhomekeka kwikhowudi? Ngaba ungumntu oxhomekekileyo? Ungakhathazeki kuba ezi ngcebiso zimbini zingabutshintsha ubomi bakho.
Iindlela ezi-5 zokutsala uthando ebomini bakho
Ngaba awukafumani umdlalo ogqibeleleyo okwangoku? Sukuba nexhala, sikunika izitshixo ezi-5 zokutsala uthando ebomini bakho.
Izinto ezi-5 esingafanele sizivumele kubudlelwane bethu njengesibini
Ngamanye amaxesha uthando luyasithintela ekuboneni imiba ethile ejongela phantsi ukuzithemba kwethu kunye nokukhula komntu kulwalamano. Fumanisa ukuba ingantoni.
Sidinga ngaphezu kothando lokuba ubudlelwane buhlale ixesha elide
Uthando ayilo kuphela intsika eyenza ukuba uthando luhlale luhleli. Siyakumema ukuba ufumane ezinye izinto eziza kwenza ubudlelwane bakho buhlale ixesha elide.
Ukubaluleka kokufunda ukuyeka
Ukufunda ukuyeka ukuhamba sisenzo sobukhalipha kunye nokukhula komntu siqu ukuba ayinguye wonke umntu owaziyo ukuphatha. Sikubonisa ukuba uyifumana njani.
Ubuhlobo, iintsika zethu mihla le
Fumanisa ukuba zeziphi iimpawu abahlobo abalungileyo abanazo, ezo zingaphelelwa lixesha kwaye zidibene namaqabane ethu, ezenza ukuba ubomi bethu buzalisekise.
Ngubani othathe ixesha elide ukuba achache ekwahlukaneni? Bona okanye thina?
Fumanisa kolu phando lulandelayo, ngubani okwaziyo ukoyisa ukwahlukana ngokweemvakalelo kwangoko: amadoda okanye abafazi. Iziphumo ziya kukumangalisa.
Ukuthanda kwangaphambili okusichazayo nangoku
Sonke sinembali yethu yeemvakalelo, apho abo bathanda uthando basiphawula ngandlela thile. Funda ukungamiseli okwangoku.
Ngothando ndifuna amaphiko ukubhabha kunye neengcambu ukukhula
Ngothando ndifuna amaphiko okukhula kwam buqu, kunye neengcambu zolo lwalamano lundibophelela kumntu endimkhethileyo ebomini bam.
Nokuba kubuhlungu, ngamanye amaxesha kungcono ukuthi kuthi ndlela-ntle
Ukuvalelisa akukho lula, kuthetha ukubandezeleka kunye noloyiko lokungaqiniseki. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha asinakukhetha ngaphandle kokuvala eso sangqa kwaye siqhubeke.
Dare ... Phuma kwindawo yakho yokuthuthuzela!
Ngaba unayo iphupha? Unayo iprojekthi? Ngaba uyamthanda umntu kwaye awunakulinga ukwenza into? Ungathandabuzi okanye uphoswe lithuba lokuphuma kwindawo yakho yokuthuthuzela!
Ukuzithanda, ubudlelwane obumele buhlale ubomi bakho bonke
Ukuzithanda kukwangamandla asidibanisayo nathi kwaye asinceda ukuba sizithande, sizihloniphe. Ubudlelwane obumele buhlale ixesha elide.
Siyavuya kakhulu ukuba akukho mfuneko yokuba siyithumele kwimithombo yeendaba
Ngokuqinisekileyo uyasazi isibini esabelana ngayo yonke into abayenzayo ngokusebenzisa iinethiwekhi zabo zentlalo. Yintoni ebangela ezi ndlela zokuziphatha?
Ngaba akhona amaqabane omphefumlo? Ukuqwalaselwa ekufuneka kuthathelwe ingqalelo
Rhoqo, bathanda "ukusithengisa" umbono wokuba elowo kuthi uneqabane lomphefumlo elisincedayo. Yintoni eyinyani ngayo?
Philphobia, xa sisoyika uthando
I-Philosophobia ichaphazela abantu abaninzi namhlanje. Bayala ukuthandana, ukuvula ubudlelwane obutsha ngenxa yokoyika ukubandezeleka okanye ukuphulukana nenkululeko.
Uthando ngaphandle kokuncamathiselwa, uthando ngendlela esempilweni
Ukuthanda ngaphandle kokuncamathisela kukuzinikela komnye ngenkululeko, ngaphandle kokungenisa lowo umthandayo kuloyiko lwethu okanye ukungazithembi. Inothando ngokugqibeleleyo kunye nokukhula ngokweemvakalelo.
Ukubaluleka "kokwazi okuthandekayo" kwesi sibini
Uthando olunomdla luyinto enikezelwa komnye ngokupheleleyo nangokukhula ngokweemvakalelo. Akakhangeli esinye isiqingatha sakhe, kodwa ufuna umntu "opheleleyo" onokonwaba naye
Ubunzima bukaWendy kunye nePeter Pan syndrome, ngaba uyakwazi ukubalisa?
Ubunzima bukaWendy kunye nesifo sikaPeter Pan sibonakalisa izibini ezininzi namhlanje, ngokumangalisayo njengoko kunokuba ngathi. Uchonge ntoni?
Iindidi zokuncamathisela kubudlelwane bababini: Iindlela ezi-3 zothando
Kwaye wena, ulithanda ngantoni iqabane lakho? Fumanisa ezi ntlobo zintathu zokuncamathisela esinokuthi siziphuhlise kubudlelwane bethu obunomdla.
Ubuntu obunetyhefu: iprofayili enoburharha-yokungenzi kwesi sibini
Abantu abaneprofayili enobundlongondlongo ngabo bahlala bebangela ezona ngxaki zinkulu kwinqanaba lamaqabane. Funda ukuzichonga.
Uthando ngokobuntu bakho
Kutheni le nto sikhetha umntu othile hayi abanye kubudlelwane bethu? Ubuntu bunento yokwenza nayo. Khangela ukuba yeyiphi ehambelana kakhulu nawe.
IKrismesi ngaphandle kweqabane? Ayinamsebenzi, yonwabele!
IKrismesi ngaphandle kweqabane? Akukho sizathu sokuba ungakonwabeli ngokupheleleyo. Njalo khumbula ukuba akukho mfuneko yokuba neqabane ukuze wonwabe. Qaphela ezi zimvo
Ubugcisa bokuphikisana ngokufanelekileyo njengesibini
Ubugcisa bempikiswano njengesibini sifuna ukubeka ecaleni izinyeliso kunye nomsindo, zihlala zisebenzisa ubukrelekrele bemvakalelo. Sikunika zonke izitshixo.
Iingcebiso zokonwabela iKrisimesi njengesibini
Uxanduva losapho noluntu ekuhlaleni, isidlo sangokuhlwa, ukuya ezivenkileni ... Sichaza indlela yokuchitha ikrisimesi ebalaseleyo njengesibini ngelixa sisinda kwezi holide.
Ngaba ukumisela ikamva kukuya kuba liqabane lethu? Sithetha ngeentsomi ezinxulumene nesi sihloko, kunye nesidingo sokuphulukana nolawulo lwempilo yakho yeemvakalelo.
Ungayichonga njani i-manipulator yeemvakalelo
Isikhohlisi seemvakalelo sisebenzisa uhlobo lokuxhatshazwa ekufuneka sifunde ukulwamkela. Ungaphoswa zizitshixo eziphambili zokuzichonga.
Ndazi njani ukuba ndilixhoba lokunyanzelwa ngokweemvakalelo?
Abasetyhini abaninzi banengxaki yokuphathwa ngokweemvakalelo ngamaqabane abo. Funda ukuyichonga kwaye uzikhusele ngokuchasene nayo apha ngezantsi.
Iinkalo zokuba unganikezeli kubudlelwane bakho neqabane
Ngamanye amaxesha, kubudlelwane bethu, sihlala sishiya izinto ezithile. Kodwa lumka, kukho izinto ongafanelanga ukuba uzijongele phantsi.
Ukubaluleka kwendawo yakho kwesi sibini
Indawo yobuqu neyomntu ngamnye kwesi sibini kubalulekile ukuseka ubudlelwane obunempilo nobonelisayo. Sichaza indlela yokufumana.
Siyazi ukuba kunzima, kodwa singalunqoba njani uthando olungafunekiyo? Sikunika izitshixo ezilula ukuze ufumane.
Ngaba uyakwazi ukunganyaniseki ngokweemvakalelo?
Ukungathembeki ngokweemvakalelo luhlobo lokungcatsha njengobuqhetseba njengoko kuqhelekile namhlanje. Ngaba uyazi ukuba imalunga nantoni? Siyakucacisela.
Iqabane lam alindiqondi: ukungabikho kovelwano
Uvelwano yenye yeentsika zezibini ezonwabileyo. Kodwa asingabo bonke abantu abaphuhlisa ngokwaneleyo obu buchule. Yintoni esinokuyenza?
Uloyiko lokushiywa kwesi sibini
Uloyiko lokushiywa yenye yezona zinto ziphambili kubudlelwane. Sichaza into efihliweyo phantsi kolo loyiko kunye nendlela yokujongana nayo.
Ukuxhaphaza ngokweemvakalelo kwesi sibini: Uza kujongana njani nayo?
Ukuxhaphaza ngokweemvakalelo kuyafana nolawulo, kwaye ke, uhlobo lokuxhatshazwa. Funda ukwahlulahlulahlula ubuhlakani kwaye ujongane nazo.
Rhoqo kwesi sibini: Uyibetha njani?
Ngaba uziva ngathi isiqhelo sifikelele kubudlelwane bakho neqabane lakho? Awuyazi indlela yokujongana nolo monotony? Sichaza ukuba ungoyisa njani phakathi kwezi zimbini
Yedwa okanye njengesibini: iingcebiso zokonwabela uSuku lweValentine
Nokuba unayo iqabane okanye akunjalo, uSuku lweValentine ngumhla ofanelwe ukonwatyelwa ukuzisebenzisa. Sichaza ukuba kutheni ...